Iinwele zikaDavid Beckham | Amadoda aQinisekileyo
Iinwele zikaDavid Beckham
UAlicia tomero | | Ukunyamekela, fashion
UDavid Beckham Ungumfanekiso wefashoni yamadoda, sele ethathe umhlala-phantsi kwibhola ekhatywayo yesiNgesi ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini, wayeyazi indlela yokudibanisa indima yakhe njengomdlali webhola ekhatywayo njengomfanekiso wentengiso. Igalelo lakho elikhulu, ubudoda bakhe, umzimba omkhulu kunye nezemidlalo umenze umntu othanda ukulandela, ngesimbo sakhe xa kufikwa kumba wokunxiba kunye nesimbo sakhe esitshintsha kwizinwele zakhe.
Siyazi ukuba yindoda ethanda ukuyikhathalela inkangeleko yakhe kwaye kulo lonke umsebenzi wakhe sikwazi ukubukela zonke iinwele ezibeke umkhwa. Ubuninzi bayo bezinwele kunye iinwele Benze uloyiso olukhulu kwaye uninzi lwabantu abancinci nakwishumi elivisayo bangena ukuba banxibe isimbo esifanayo. Okulandelayo, siphonononga ezona zibalaseleyo.
1 Isitayile seFaux Hawk
2 Iinwele ezinde
3 Inwele yePompadour
4 Buzz Sika
5 Ukunqunyulwa ngokulula ngokuthungwa
7 Ukuhamba kweBlo
Isitayile seFaux Hawk
Zininzi iindlela zokunxiba le nwele. Njengesiqhelo Ubume bayo bubungqangi bendabuko, nokuba mfutshane okanye inde kwaye abantu abaninzi bangenile ukuze bakwazi ukuyinxiba nangesuti. Le nwele inokuba mbi kakhulu, ineentaba ezingenakwenzeka, kodwa u-Beckham ukwazile ukunxiba kwi-2002 ngeklasi eninzi.
Unokubonakala kwindima yakhe njengomzali onoxanduva kwaye oko kujongeka kupholileyo. Kule mihla ikwangumhleli weempawu kwaye unokuxelela umntu owenza iinwele ukuba enze ukuthotywa ngasemva nasemacaleni kwaye ushiye umphezulu ngeenwele ezinde, kunye nevolumu kunye nezinto eziqaqambileyo kunqunyulo lwakho ukufumana ubume.
Sonke siyamkhumbula uDavid ekubonakaleni kwakhe kokuqala kunye nelo iinwele ezinde. Lawo yayingamaxesha apho wayedlala khona kunye neqela lakhe lebhola ekhatywayo kwaye yayiyile mane apho abaninzi babethandana naloo mbala mhlophe kunye nezinto eziphambili.
Uninzi lweenwele lubone indlela esetwe ngayo enye inwele apho kwakufuneka ushiye iinwele zakho zinde, kodwa phezulu kwiindlebe. Musa ukulinda ukuba iphinde inxitywe kwakhona, ukuzivumela ukuba uqhutyelwe kukukhula kweenwele yinto eqhubeka ukuphawula isitayile sobuqu nesahlukileyo.
Le nwele yaziwayo yayisele idumile ngoMatshi wasePompadour. Iqukethe ukunxiba iinwele eziboshwe ipompadour enkulu embindini, uzilungiselele kakuhle kwaye unesitayile. Yinwele ephindaphindwayo phakathi kosaziwayo kunye no-Becks kwiminyaka yakhe yamashumi amane beyazi indlela yokuyinxiba ngobuhle obukhulu.
Este ipompadour yokucheba iinwele Kude kube ngoku ayinakamhla wokuphelelwa kwayo kwaye isetyenziswa ngamaxesha ahlukeneyo, ngakumbi kubantu abancinci. UJason Collier ngusitayile kaDavid kunye nosapho kwaye uhlala ekhetha olu hlobo lokusikwa, kuba luyamnika ubuntu kunye nobudoda. Ungayithatha uye nakuyo yonke iminyhadala, eyokubakho kwamaqela abucala kunye nokuhambahamba nosapho.
Sibona uBeckham nge iinwele kulula ukuzenza, nangona inomdla ukuba inenzululwazi yokwenza olu hlobo lokusikwa. Xa sabona uDavid enentloko yakhe iphantse yachetywa, sasinokucinga ukuba iinwele zinganxiba kwaye kulapha wenza ifashoni enkulu ekusetyenzisweni kwayo.
Ukwenza oku kusikwa kufuneka ukunciphisa iinwele kangangoko kunokwenzeka, kodwa ngaphandle kokushiya inkqayi. Kungcono ukuyenza ngoncedo, njengoko sinokuqinisekisa ukuba akukho malungu angaqhelekanga ezinweleni. Enye indlela yokwenza oko kukushiya umphezulu wentloko ithuba elide kunamacala.
Ukunqunyulwa ngokulula ngokuthungwa
Oku kusikwa yenye yezona zisetyenziswa kakhulu kuwo onke amaxesha onyaka, kwaye yenye yezona zisetyenziswa kakhulu ngabantwana bakho. Umbono kukwenza ukusika okulula, ngamacala ancitshisiwe kwaye ushiye umphezulu wentloko ixesha elide.
Umbono kukuvumela ii-bangs ziwele kancinci ebunzi kwaye zinike ubume obuncinci kuyo yonke indawo ejikelezileyo ukujonga okungathandekiyo. Le ndlela ayifuni kulungiswa kakhulu xa ushiya isalon kwaye kulula ukuyiphumeza kwiindidi ezininzi zeenwele. Ukufezekisa iinwele ezisisigxina ngu Kulula ukusebenzisa ii-wax okanye i-gels ezingenangqondo.
Oku kunqunyulwa yenye yeendlela eziqhelekileyo kwiifoto zakhe. Inesitayile esisikiweyo kumacala ayo afikelela kwinxalenye ende yentloko. Asilibali ukuba indibaniselwano yakho igqibelele iindevu ezikhulile kwaye yalungiselela iintsuku ezininzi.
Asiqhelananga negama lale ndlela, kodwa singayichaza loo nto ngaba oku kusikiweyo okanye isiqingatha seenwele oko kuhlala kumchaza. UDavid uhlala ezisa le nto inde, ibuyile-umva kwaye kwezinye iimeko wacheba iinwele ebomini, enika ukujonga okungaqhelekanga.
UDavid Beckham okwangoku uneminyaka engama-45 kwaye uyaqhubeka nokuba ngumqondiso osoloko uphawula isimbo nobuhle. Uhleli ephawula ubumdaka kuzo zonke iinwele zakhe kwaye njengemodeli enxibe nosapho lwakhe ngexesha elifanelekileyo nangempahla entle. Sisenalo mdlali owayesaya kuqhubeka nokuvuna iimpembelelo ngokunika iindlela zamvanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iinwele zikaDavid Beckham
Ukuphela kusikiwe endodeni
Ukuhambisa isifuba, ewe okanye hayi?